Ndị ọrụ TSA hụrụ egbe egbe ebujuru na-ebu na El Paso Airport
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Ndị ọrụ TSA hụrụ egbe egbe ebujuru na-ebu na El Paso Airport
Airport • Aviation • News • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
A hụrụ aka aka na ọdụ ụgbọ elu El Paso - site n'aka TSA
N'ime otu ọnwa, ndị isi na-ahụ maka ndị njem na-ahụ maka ụgbọ njem hụrụ egbe 6 n'ime akpa ndị njem na ebe nchekwa na El Paso.
Achọpụtara ngwa ọgụ site n'igwe igwe X-ray.
Ichikota egbe ebuputara na ngwa agha nwere ike ibute ebe nchebe na-eburu otu ntaramahuhu obodo na nke oma dika iweta ngwa agha edere na ebe nlele.
N'ọnọdụ niile, a gwara ndị uwe ojii ma boro ndị nwere ike ibu ndị njem ebubo.
A hụrụ egbe egbe a na-ebugharị na ọdụ ụgbọ elu El Paso n'oge 6 dị iche iche sitere na oge February 19 ruo March 26, 2021. Ejiri egbe ndị a niile ma e wezụga otu.
Igwe nyocha X-ray nyocha bụ ihe achọpụtara ngwa agha ahụ, na n'ọnọdụ niile, ndị uwe ojii El Paso dọrọ aka na ntị. Ndị ga-abụ ndị njem bụ zoro aka na ngwa agha. Onweghị ihe na-egosi ihe mere onye ọ bụla dịka njikọta n'ụzọ ọ bụla.
Na mba nile, ndị ọrụ TSA achọpụtala egbe 1,006 ruo ugbu a na pasent 86 nke ndị a ebuola ibu. N’afọ 2020, a hụrụ egbe dị puku atọ, narị atọ na iri atọ na asaa n’obu ibu n’ọdụ ụgbọelu n’obodo niile.
Enwere ike ibugharị ngwa agha n'ụgbọ elu azụmahịa naanị ma ọ bụrụ na ebupula ya, tinye ya na mkpọchi akpọchi, akụkụ siri ike ma tinye ya na akpa. Mgbe ahụ, ha kwesịrị iji ikpe ahụ gaa na mpempe akwụkwọ ụgbọ elu ụgbọ elu iji kwupụta egbe, mgboagha, na akụkụ egbe ọ bụla.
Mgboagha na egbe egbe, tinyere egbe egbe, ndị nnata, obere vidiyo, na magazin ka amachibidoro ibu ibu na a ga-enyocharịrị ya. A na-amachibidoro égbè eji ebu ibu na-ebu ibu na ibu.
Dị ka Ebe nrụọrụ weebụ TSA, iweta egbe ebuputara na ngwa agha nwere ike ịnweta na ebe nchekwa na-eburu otu ntaramahụhụ obodo / iwu dị ka iweta égbè ebujuru na ebe nlele.
Tupu ịga njem, a na-agba ndị njem ume ịlele iwu na ụkpụrụ egbe na ebe ha na-aga iji hụ na ha na-agbaso iwu obodo na nke steeti. TSA na-atụkwa aro ndị njem ka ha nyochaa ụgbọ elu ha tupu ha agbaa ụgbọelu iji hụ na ha rube isi n'iwu chọrọ ụgbọelu ọ bụla.